बुधबार १६ पुस, २०७६ (Wednesday, 01 January, 2020)
‘सञ्चारमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : म चुप्पी बोकेर पत्रकारिता सिध्याउन हिँडेको छैन
१७ पुस, काठमाडौं । माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा २ हजार ५६ जना मतदाताले मतदान गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सपनामात्रै बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन, देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्, अनि हावाबाट बिजुली यस्तै यस्तै सपना । प्रधानमन्त्री आफैंले भन्ने गरेका पनि छन्–म मुर्छित सपनाहरुलाई ब्युँताउन चाहन्छु । मैले देखेका र देखाएका सपनाहरु पूरा गर्नकै लागि हुन् । सम्बृद्ध नेपाल प्रदेशसभा सदस्य ५५० र स्थानीय तहका प्रमुख र...
कुन छाउगोठ भत्काउने ? बच्चालाई के सिकाउने ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सबै संकायमा ताला, पठनपाठन बन्द
‘कोक्रोमा’ नेपाली भोटो र दौरासुरुवालको पोको
हात्तीमा क्षयरोग र क्यान्सर, गैंडामा पनि जोखिम !
Post By: Robot Smith 8 12
काठमाडौं । ‘पिके’ ! नझुक्निुहोस्, यो प्रसंग आमिर खान स्टारर फिल्म ‘पिके’को होइन । न कुनै पियक्कडकै कथा हो । कुरा पिके डाँडाको हो, जो पदयात्राका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ ।
सात वर्षअघि यही बाटोबाट यात्रा गर्दा र अहिलेको परिवेश फरक पाएँ । त्यसबेला यस बाटोमा स्थानीयबासी मात्र हिँडिरहेका भेटिन्थे । अहिले आगन्तुक अर्थात आन्तरिक पर्यटक थपिएछन् ।
हुम्लामा यसपालि जिन्दगीकै जोखिमपूर्ण बाटो हिँडियो । तल कहालिलाग्दो खोला, माथि टोपी खस्ने भीर । बाटोको आयतन पैतालासम्म अटाउने । ‘डर के आगे जीत है’ भन्ने हिन्दी कहावतझैं जोखिमको बाटो छिचोलेपछि अहा !
सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने आदर्शको स्रोत मेरो समाचार
© 2020 Mero Samachar, All rights reserved
समाज / साहित्य
खेलकुद़़ / रोचक विश्व
जीवनशैली / राम्रो नेपाल
अन्तराष्ट्रिय / राष्ट्रिय
बजार / अर्थनीति
पर्यटन / साहित्य
Designed by Soft Benz